Nhungamiro Kubva Semalt Kuchenesa Chrome YeZvesa, Pop-Ups & Malware
Kazhinji kacho, vanhu vanogunun'una kuti Google Chrome yavo inogara ichidzorera kune mawebsite asina kufanira uye zvikwata zvepad-up. Zvinhu izvi zvinooneka patinotarisa paIndaneti kana kuedza kuwana mafirogiramu edu ehupfumi. Kana iwe uchiona zvinhu zvakadai zuva nezuva, kune mikana iyo yakombiyuta yako inotapukirwa nemapurogiramu asina kudiwa kana malware.
Frank Abagnale, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji Semalt , anotsanangura kuti ungasunungura sei Chrome yako kubva kune zvinovhiringidza macheza, pop-ups, uye malware.
Matambudziko neGoogle Chrome
Paunenge uchitarisa internet, kana ukaona chimwe chezvinhu izvi neGoogle Chrome, unogona kunge wakagadzira chirongwa chinotapukirwa kana kuti malware kune kombiyuta yako:
Zvinyorwa zvepap-up zvinowanzoitika zvakare - plastica giardino.
Tsvakurudzo yako yekutsvaga injini kana kuti homepage yeC Chrome iri kuchinja mararamiro ayo kana yakagadzirirwa kune imwe webhusaiti zvayo.
Kana ukaona zvishandiso zvisingazivikanwi, kuwedzera kwe Chrome kana zvimwe zvinhu zvisingazivikanwi kamwe muawa.
Unotungamirirwa kune mawebsite anozivikanwa uye zvisizvo zvisingakanganwiki zvekushandisa.
Nzira yekuchenesa sei Chrome yezvinyorwa zvisingadikanwi, pop-ups, & malware
Chokutanga pane zvose, zvinokosha kuti urege kutora software isingazivikanwi kana zvinhu kubva paIndaneti..Iwe unofanirwawo kudzivisa kushanyira mawebsite evanhu vakuru sezvavanowanzo vane maitiro emavirusi uye malware.
Unogona kuchenesa Chrome yezvinyorwa zvisingadikanwi, pop-ups, & malware nekuchengeta mupfungwa nezvezvinhu zvinotevera.
1: Bvisa mapurogiramu asina kudiwa kubva ku Chrome (Windows chete)
Kana uri kushandisa Windows kana imwe sangano rekushanda, unofanira kushandisa Chrome Cleanup Tool iyo inotsvaga kombiyuta yako kune mapurogiramu ane malware uye anonyunyuta, achipa nzira dzakanakisisa dzokubvisa dzose. Kana uri kushandisa Linux kana kuti Mac kombiyuta, unofanira kutamira kune rimwe danho rinotevera. Endai kuChrome Cleanup Tool pakusarudza kakombiyuta yeWindows uye chengetai software yacho nokukurumidza. Dzvanya Kugamuchira uye Kurapa uye kuipa nguva yekuwana yakadzingwa. Kamwe kuregera kwapera, Windows inokukumbira kuti uite faira kana kwete; iwe unofanira kutora Run Run kuitira kuti Chrome Cleanup Tool inogona kunyatsoongorora scan yako. Iwe unofanirwa zvakare kuvhara Bvisa sarudzo kuti ubvise mapurogiramu anokonzera uye mavairasi.
2: Bvisa mapurogiramu asina kudiwa (makombiyuta ose)
Kana wakatenga kana kutora anti anti-malware kana chirongwa chinorwisa antivirus, unofanira kuchiisa pakarepo uye kumhanya kuti ubvise mafaira anokuvadza uye ane chokwadi. Iwe unogona zvakare kuedza Malwarebytes; iyi anti-malware software iri nani kupfuura mamwe mapurogiramu akafanana sezvainobvisa mafaira asina kufanira uye data kubva pane imwe kakombiyuta yako mumaminitsi. Kana iwe wakaisa iyi software, pane mikana yokuti Chrome Cleanup Tool ingasashanda zvakanaka.
3: Dzorerazve shanduro dzako (makombiyuta ose)
Unogona kugadzirisa zvakare mararamiro ako chekutsvaga kuti ubvise malware uye mavairasi. Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kuzarura Chrome pane makombiyuta ako uye chengetedza pane Zvisarudzo. Zvadaro iwe unofanira kufanidza paZvikwidziridza uye Zvisarudzo zvekugadzirisa zvekugadzirisa zvakare shanduro dzako, uye izvi zvinoshanda chero pakombiyuta kana mafoni. Kana iwe uchitarisana nechinetso chipi nechipi, tinokukurudzira kuti udzoke dambudziko racho kune software software kana chengetera Chrome Help Forum.